एसईओ पुनर्विक्रेता प्याकेजहरूका लागि एक सरल गाइड - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
10 सक्छ, 2021 10 सक्छ, 2021 चाम्सी पीरसन अरबी फ्रीलान्स, B2B, शुरुआतीहरूको लागि सर्वश्रेष्ठ फ्रिल्यान्स वेबसाइटहरू, ब्लग, व्यापार, चीनियाँ स्वतन्त्रता, विशेष समाचार, FGG कम लागत बजार, फ्रीलान्स ग्लोबल गिग (FGG) कम लागत बजार, ग्लोबल थोक अनलाइन, हिन्दी फ्रिल्यान्स गिग्स, इन्डोनेसिया फ्रीलान्स गिग्स, अनलाइन थोक र B2B, अनलाइन थोक र B2B बजार, पोर्तुगाली फ्रीलान्स गिग्स, रसियन फ्रीलान्स गिग्स, B2B अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, ग्लोब किन्नुहोस्, थोक अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, स्पेनिश फ्रीलान्स गिग, प्रविधि, थोक, थोक - B2B, थोक र B2B बजार, थोक बजार अनलाइन खरीद र बिक्री
यदि तपाइँ वेब विकासकर्ता हुनुहुन्छ भने, तपाइँलाई आफ्नै वेबसाइटको प्रबन्ध गर्न यो धेरै गाह्रो हुन सक्छ।
एक सेवा खोज्नुहोस् जुन तपाईंलाई सजिलो स्थापना प्रक्रियाको साथ प्रदान गर्दछ ताकि तपाईं केहि पनी चिन्ता लिनु पर्दैन।
जीवनमा सबै चीजहरूको रूपमा, तपाईं पाउनुहुनेछ कि लागत एकदम थोरै भिन्न हुन्छ।
यदि तपाईं इन्टर्नेट मार्केटि ofको संसारमा नयाँ हुनुहुन्छ र तपाईंको व्यापार अझै सम्म बीउबाट बगैंचाको बोट जस्तै बढ्न शुरू भएको छैन भने, त्यसोभए तपाईं आफ्नो वेबसाइटको लागि एसईओ पुनर्विक्रेता प्याकेजहरू प्रयोग गर्न विचार गर्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईंको राजस्वमा ठूलो फरक पार्न सक्छ। तपाईंको आवश्यकता प्रस्टसँग परिभाषित गर्नुहोस् र तपाईंको सेवा प्रदायकसँग छलफल गर्नुहोस्। पहिलो कुरा दिमागमा आउँछ यदि यो वास्तवमै लागतको लायक हो भने। ठिक छ, जाँच गर्न यहाँ एक सरल चेकलिस्ट छ:
उदाहरण को लागी, यदि तपाईं एक वेब विकासकर्ता हो, यो तपाईंलाई धेरै गाह्रो हुन सक्छ तपाईंको आफ्नै वेबसाइट को प्रबन्धन गर्न। तपाईं एक बन्न रोज्न सक्नुहुन्छ SEO पुनर्विक्रेता। त्यहाँ धेरै प्याकेजहरू छन् जुन तपाईले यस फिल्डमा मद्दत गर्नका लागि छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। यी मध्ये केहि तल सूचीबद्ध छन्:
साइट निर्माणकर्ता। यो एक प्रोग्राम हो जसले तपाईंलाई सजिलै आफ्नो साइट सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ। तपाइँ तपाइँको साइट को लागी केहि मिनेट को लागी लेआउट को निर्माण गर्न को लागी सक्षम हुनेछ। यो प्रबन्ध गर्न सजिलो छ, र यसले तपाईंको साइटलाई अधिक आकर्षक र व्यावसायिक बनाउन मद्दत गर्दछ।
फिर्ता लिinking्क गर्नुहोस्। धेरै अनलाइन उद्यमीहरू उनीहरूको एसईओसँग संघर्ष गर्दैछन् किनभने तिनीहरूलाई लिंकहरू कसरी पनी कसरी गर्ने भन्ने बारे थाहा छैन। यो SEO मा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो प्याकेजले तपाईंलाई तपाईंको लिंक लोकप्रियता बढाउन मद्दत गर्दछ। तपाईंसँग आफ्नो अनलाइन व्यापारको लागि लिंकहरू पुन: सिर्जना गर्ने क्षमता हुनेछ। यो तपाइँ तपाइँको साइट मा अधिक यातायात दिन सक्छ।
खोजशब्द अनुसन्धान। यदि तपाईं पहिले नै एसईओ पुनर्विक्रेता हुनुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो ग्राहकहरूलाई लक्षित गर्ने खोजशब्दहरू अनुसन्धान गर्न कत्ति गाह्रो छ भन्ने कुरा तपाईंले बुझ्नु भएको हुनुपर्छ। यी प्याकेजहरू धेरै खोजशब्द अनुसन्धान उपकरणहरूको साथ आउँदछ, जसले तपाईंलाई तपाईंको साइटहरूको लागि उत्तम कुञ्जी शब्दहरू सजिलै पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ।
ईमेल हस्ताक्षर। यसले तपाईंलाई राम्रो ग्राहक आधार निर्माण गर्न मद्दत गर्न सक्दछ। यो धेरै सहयोगी हुनेछ यदि तपाईं आफ्नो ग्राहकहरूलाई बल्क ईमेल पठाउन र अधिक आय उत्पन्न गर्न चाहानुहुन्छ।
उच्च आयोग मूल्यहरु। यो कारकले ठूलो भूमिका खेल्छ जब यो अनलाईन व्यवसाय सुरु गर्न आउँदछ। तपाईंले आफ्नो व्यवसाय चलाउन सजिलो बनाउनको लागि तपाईंले सस्तो प्याकेजहरू फेला पार्न आवश्यक छ। धेरै एसईओ प्रदायकहरु तपाईले किन्न सक्ने कम मूल्यको प्याकेजहरुको धेरै प्रस्ताव गर्छन्। यद्यपि तपाईंले सेवाहरूको गुणस्तरसँग सम्झौता गर्नु हुँदैन। तपाईं अझै पनी समाप्त हुनेछ यस व्यवसाय मा एक सफल बनाउन।
त्यहाँ SEO पुनर्विक्रेता प्याकेजहरू खोज्दा विचार गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्। तपाईलाई सहि छनौट गर्न यो महत्त्वपूर्ण छ। याद राख्नुहोस्, तपाइँले ग्राहकहरू पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ जसले तपाइँबाट SEO सेवाहरू खरीद गर्दछन्। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईको लागि सबै चीज सजिलो र सुविधाजनक छ। प्याकेजहरू खोज्नुहोस् जुन तपाईंलाई समय बचत गर्न मद्दत गर्दछ। यदि तपाईं यी सबै चीजहरू गर्नुहुन्छ भने, तपाईंसँग पनी पक्कै सजिलो समय तपाईंको व्यवसाय अनलाईनमा चल्नेछ।
सजिलो स्थापना। तपाईंको आफ्नै SEO साइट सुरू गर्न सक्षम हुन, तपाईंलाई प्रणालीमा सजीलो पहुँच दिइनु पर्नेछ। एक सेवा खोज्नुहोस् जुन तपाईंलाई सजिलो स्थापना प्रक्रियाको साथ प्रदान गर्दछ ताकि तपाईं केहि पनी चिन्तित हुनु पर्दैन। सम्पूर्ण प्रक्रिया सजिलो र रमाईलो बनाउनु पर्छ।
किफायती मूल्य निर्धारण। सकेसम्म, तपाईं सस्तो आउने एसईओ सेवाहरू चाहानुहुन्छ। यद्यपि क्वालिटी बलिदान नगर्नेलाई खोज्न सजिलो छैन। त्यसोभए ती एसईओ कम्पनीहरूका लागि खोजी गर्नुहोस् जसले सेवाहरूको गुणस्तर त्याग नगरी सस्तो मूल्य प्रस्ताव गर्दछ। थपको रूपमा, ती व्यक्तिहरूलाई खोज्नुहोस् जसले यी सेवाहरू प्रस्ताव गर्छन् प्रारम्भिक लगानीको रूपमा ठूलो रकम चार्ज नगरी।
लॉक-इन अवधिहरू छैनन्। SEO पुनर्विक्रेता प्याकेजको मद्दतले, तपाइँको साइट छोटो समयमा सुरू गर्न सकिन्छ। यदि तपाईं आफ्नो अनलाइन ब्यापार उद्यमको फाइदाहरू लिन सक्नु अघि तपाईं लामो समय पर्खन चाहनुहुन्न भने, ती प्याकेजहरू छनौट गर्नुहोस् जुन कुनै लक-इन अवधि प्रदान गर्दैन। यसको मतलव तपाईको साइट भुक्तानी प्राप्त भएको लगत्तै सुरू गर्न सकिन्छ।
अनलाइन उद्योगमा सफलता प्राप्त गर्न सजिलो छैन। जे होस्, यदि तपाईं सफल हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले समय र प्रयास लगानी गर्न आवश्यक पर्दछ विश्वसनीय र एसईओ प्रदायकहरू फेला पार्न। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं केहि पनि चीजको लागि व्यवस्थित हुनुहुन्न जुन तपाईंलाई आवश्यक भएको भन्दा थोरैमा। ती एसईओ पुनर्विक्रेता प्याकेजहरू खोज्नुहोस् जुन किफायती छ तर शीर्ष-खाच जब यसको प्रदर्शनको कुरा आउँदछ।
प्याकेज विकल्पहरू जाँच गर्नुहोस्। तपाईं आफ्नो डोमेन नाम प्रयोग गर्न सक्षम हुन सक्नुहुन्छ, त्यसैले केवल तपाईंले गर्नुपर्ने कुरा भनेको वेबहोस्टिंग कम्पनी परिवर्तन गर्नु हो। तपाईंको आफ्नै नाम प्रयोग गरेर मुख्य फाइदा भनेको तपाईंको साइट सिर्जना गर्दा तपाईंसँग बढी लचिलोपन हुन्छ। एक साझा होस्टको साथ, तपाईं आफ्नै डोमेन वा त्यस्तो केहि थप्न सक्नुहुन्न।
यदि तपाईं बहु प्याकेजहरू प्रयोग गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, ती सबै जाँच गर्नुहोस्। विभिन्न होस्टिंग साइटहरूमा जानका लागि उपयोगी हुन सक्दछ कि उनीहरू कति जाँदैछन् भन्ने बारे विचार। यी प्याकेजहरू, एसईओ होस्टिंग सहित, उनीहरूको आफ्नै मूल्यको साथ आउँछ। त्यहाँ केहि छन् जुन सित्तैका विकल्पहरू पनि प्रदान गर्दछ। तलको रेखा यो हो कि तपाईको अनुभवबाट बाहिर जानको लागि तपाईले खोज्नु भएको कुरामा यो भर पर्दछ।
केहि खरीद गर्नु भन्दा पहिले केहि अनुसन्धान गर्नुहोस्। धेरै जसो एसईओ प्याकेजहरू अनलाइन फेला पार्न सकिन्छ, तपाईं अझै पनी प्रदायकहरूले के प्रस्ताव गर्दछ खोज्न चाहानुहुन्छ। तपाईं जहिले कम्पनीको समीक्षा पढ्न सक्नुहुन्छ र अन्य व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ जसले तिनीहरूलाई प्रयोग गर्ने उनीहरूको बारेमा उनीहरूको सोच्नको लागि।
के यो सफ्टवेयरको साथ आउँछ? केहि प्याकेजहरुमा सफ्टवेयर सामेल हुन सक्छ, जबकि अरुले नहुन सक्छ। यो प्रदायकमा निर्भर गर्दछ। यदि तपाईं केवल एक साईट स्थापित गर्दै हुनुहुन्छ भने, उत्तम कुरा प्रदायक भेट्टाउनु उत्तम हुन्छ। जहाँसम्म, यदि तपाइँको दिमाग एसईओ पुनर्विक्रेता हो भनेर सेट गरिएको छ भने, त्यसोभए प्याकेज खोज्न अझ महत्त्वपूर्ण हुन सक्दछ जुन तपाइँले व्यवसाय प्रबन्ध गर्न आवश्यक सबै उपकरणहरू समावेश गर्दछ। तपाईं यी मध्ये कुनै एक खरीद गर्न विचार गर्न सक्नुहुन्छ ताकि तपाईं सफ्टवेयर छुट्टै फेला पार्ने समस्यामा पर्नु पर्दैन।
यस प्याकेजमा के समावेश छ? यो महत्त्वपूर्ण छ किनकि तपाईं प्याकेजमा समावेश सबैकुरा चाहनुहुन्छ। यदि तपाईं केवल एक साईट स्थापित गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईं थप उपकरणहरूमा पैसा खर्च गर्न चाहनुहुन्न। जहाँसम्म, यदि तपाईं सम्पूर्ण व्यापार चलाउन गम्भीर हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईं यी सुविधाहरूमा पैसा खर्च गर्न चाहानुहुन्छ। तपाईं सामान्यतया यो जानकारी प्रदायकको समीक्षा पढेर वा ग्राहक सेवालाई सम्पर्क गरेर यदि प्रदायकले तपाईंलाई चाहिने अतिरिक्त प्रदान गर्दछ कि भनेर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ।
के तपाई ग्यारेन्टी पाउनुहुन्छ? तपाईं थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि त्यहाँ पूरा पैसा फिर्ता ग्यारेन्टी छ कि छैन। यदि तपाइँले एक साइट किन्नुभयो र फेला पार्नुभयो कि यो तपाइँले सोचे जस्तो होइन, तब तपाइँ तपाइँको मूल प्याकेजमा फर्कनको लागि तपाइँ तपाइँको पैसा फिर्ता लिन चाहानुहुन्छ। धेरै प्रदायकहरूले यो ग्यारेन्टी प्रस्ताव गर्छन्, जुन तपाईंलाई चीज फिर्ता गर्न सजिलो बनाउँदछ।
तपाईं एक किन्नु पर्छ? यो केहि फरक कारकहरु मा निर्भर गर्दछ। यदि तपाईं सामान्यमा एसईओको बारेमा धेरै जान्नुहुन्छ भने, त्यसपछि तपाईंलाई सम्भवतः थाहा छ यदि तपाईंले यी प्याकेजहरू मध्ये कुनैमा पनि लगानी गर्नुपर्छ। जे होस्, यदि तपाईं एसईओमा तुलनात्मक रूपमा नयाँ हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईलाई सरल प्रोग्राम फेला पार्न उत्तम हुन्छ। जहाँसम्म, तपाईं यी मध्ये कुनै एकमा लगानी गर्नुहुन्छ कि किन नहोस्, तपाईंले उपकरणहरू पाउन सक्नुहुनेछ जुन तपाईंले एसईओ पुनर्विक्रेता व्यवसायलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ।
SEO पुनर्विक्रेता प्याकेजहरूको लागि तपाईंले कति तिर्नु पर्छ? जीवनमा सबै चीजहरूको रूपमा, तपाईं पाउनुहुनेछ कि लागत एकदम थोरै भिन्न हुन्छ। धेरै कम्पनीहरूले तपाईंलाई साइन अप गर्न र सेवाहरू फ्ल्याट एक समय शुल्कको लागि पुन: बेच्न अनुमति दिनेछ। केहि अवस्थाहरूमा, तपाईले छुट पाउन मद्दतको लागि छुट र अन्य सुविधाहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ। कुञ्जी कम्पनीको अनुसन्धान गर्नु हो र तपाईंको लागि उत्तम काम गर्ने एउटा फेला पार्नुहोस्।
एसईओ पुनर्विक्रेता खाता को साथ प्रदान गर्ने को छ? यो एक धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो जब तपाईंले एक कम्पनीमा साइन अप गर्ने तरिका पत्ता लगाउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। जबकि त्यहाँ धेरै प्रकारका SEO पुनर्विक्रेता खाताहरू छन्, दुई सबै भन्दा साधारण स्वतन्त्र र सम्बद्ध हुन्छन्। तपाईले केहि अनुसन्धान गर्न चाहानुहुन्छ प्याकेजहरू र बिक्रेताहरूको प्रकारहरूको बारेमा अझ बढी पत्ता लगाउन जुन तपाईं उपलब्ध हुनुहुन्छ कि छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
अन्तमा, के हुन्छ यदि तपाईंले नतिजा प्राप्त गर्नुभएन भने तपाईं आफ्नो एसईओ पुनर्विक्रेता प्याकेजबाट खोज्दै हुनुहुन्छ? यदि तपाइँलाई यो हुन्छ भने, त्यहाँ धेरै कारणहरू छन् किन यो हुन सक्छ। सबै भन्दा सामान्य कारण यो हो कि कम्पनी राम्रोसँग राम्रोसँग स्थापित भएको थिएन वा अन्तिममा निर्माण गरिएको थिएन। केहि केसहरूमा, यो तपाईको केसलाई मात्र थाहा हुन सक्दछ कि तपाई के खोज्दै हुनुहुन्छ। यी अवस्थाहरूमा, केवल अन्य खरीददारहरूको साथ कम्पनीको प्रतिष्ठा जाँच गर्नुहोस् र तपाईं ठीक हुनुपर्छ।
सांप्रदायिक समाचार SEO पुनर्विक्रेता
चाम्सी पीरसन स्वतन्त्र सामग्री लेखक हुन् र अनलाइन प्रकाशनका विभिन्न प्रकारका लागि लेख्छन्। ऊ ब्लग र लेख प्रविधि, व्यापार, वित्त, फेशन र अधिक मा सम्बन्धित छ।